Puntland oo ka jawaabtey Hadalkii Wasiir Goodax Barre – Radio Baidoa
Puntland oo ka jawaabtey Hadalkii Wasiir Goodax Barre
By Webmaster	 On Jan 26, 2020
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada dowladda Federaalka Soomaaliya aya Wareysi uu bixiyey Maalin ka hor waxaa uu ku sheegay in Ardayda Puntland aan wax Shahaado ah la siin doonin ilaa iyo ay ka qeyb-galaan Imtixaanka ay qaadeyso Wasaaradiisa.
Hayeeshee waxaa hadalkaas Maanta oo Axad ah jawaab ka bixisay Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Puntland oo sheegtay in intii at Puntland jirtey ay Imtixaankeeda iyada qaadeysay.
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Puntaland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sheegay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo tan Puntland ay heshiis ku yihiin geedi socodka iyo dib u dhiska hanaanka federaaliga ah ee Waxbarashada,iyada oo saldhig uu u yahay Dastuurka KM ah ee Soomaaliya iyo kan Puntland.
Sidoo kale Wasiirka waxaa uu hadalkiisa intaasi ku darey in labada Wasaaradod ay dhowr mar ku heshiiyeen in Puntland ay si madax bannaan u qaadeyso imtixaanka Ardayda deegaannada Maamulkaas,,dejinta iyo sixida Imtixaanka,isla markaana deeqaha waxbarasho lagu bixiyo heerka kaal sareynta,waxaana uu soo bandhigey Heshiisyo dhowr ah oo kale ah.
1: In Puntland u madax bannaan tahay qaadista imtixaanka Ardeyda deegaannada Puntland.
2: In wasaaradda Waxbarashada federaalka ay imtixaanka ku leedahay talo,kormeer iyo taageero dhaqaale.
3: In Waaaradda Waxbarashada Puntland ay Wasaaradda Waxbarashada dowladda Federaalka Soomaaliya u gudbiso Imtixaankii ay qaadey.
4: In laga wada tashado sidii loo hormarin lahaa Imtixaanka guud ahaan Soomaaliya.
5:In la isku waafaqo bixinta Shahaadada si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan cadeynta aqoontooda taas oo ay xaq u leeyihiin.
5: In shahaadada Ardayda deegaanada Puntland laga bixiyo Xafiiska Imtixaanadka wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo qodobo kale.
Jubbaland oo Xukun dil ah fulisey
Al-Shabaab executes three men in second case within a month